Description:Iphone 6S Battery,Apple 6S Battery,Iphone 6S Battery External,Apple Iphone 6S Battery,,
Home > Products > Batterie IPhone > IPhone 6S Battery
Ny vokatra avy amin'ny IPhone 6S Battery , mpanofana manokana avy any Shina, Iphone 6S Battery , Apple 6S Battery mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Iphone 6S Battery External R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Batteran'ny fanamoriana finday ho an'ny finday ho an'ny iPhone 6 6s  Contact Now
Solika fanoloana bateria ho an'ny iPhone 6 6s  Contact Now
Solovy ny bateria iPhone 5S vaovao 100%  Contact Now
Manamboatra bateria iPhone 6S vaovao  Contact Now
2200mAh iphone 6s super capacitreurie  Contact Now
Ny bateria Li-polymer ho an'ny iPhone 6s 1715mAh  Contact Now
amboary ny bateria lipo vaovao 6s vaovao  Contact Now
Ny bateria finday iPhone 6s finday tsara indrindra amidy  Contact Now
OEM ambany vidy iphone 6s tany am-boalohany  Contact Now
Fivarotana lafo vidy mora apple apple bateria vaovao  Contact Now
Solosaina finday finday fanoloana bateria finday 6S  Contact Now
Ny fanoloana ny bateria apple 66 tany am-boalohany  Contact Now
Apple iPhone 6S Battey Fizarana bourte Original  Contact Now
Soloy bateria iPhone 6S vaovao  Contact Now
Batteran'ny fanamoriana finday ho an'ny finday ho an'ny iPhone 6 6s
Ny iPhone manaraka an'i Apple dia manana dikan-teny roa, ny iray dia iPhone6 ​​4,7 santimetatra ary ny iray dia iPhone6 ​​Plus 5,5-inch. Ireo dikan-dahatsoratra roa ireo dia manana batterie finday miorim-paka samihafa habetsahana noho ny...
Solika fanoloana bateria ho an'ny iPhone 6 6s
Iphone 6 Batterie sy bateria Iphone 6s dia tsy azo ampiasaina eran-tany. Misy antony roa amin'ity: 1. Ny bateria Apple 6 dia mahazaka 1810 mAh, raha toa kosa ny bateria Apple 6s dia manana herinaratra finday an'ny bateria 1715 mAh. Ny...
Solovy ny bateria iPhone 5S vaovao 100%
Ny fatran'ny bateria iPhone 6s dia 1715mAh. Fotoana firesahana: hatramin'ny 14 ora rehefa mampiasa tambajotra 3G. Fampiasana Internet: hatramin'ny 10 ora rehefa mampiasa tambajotra 3G, hatramin'ny 10 ora rehefa mampiasa tambajotra 4G...
Manamboatra bateria iPhone 6S vaovao
Raha mikasika ny telefaona Apple, ny tiako indrindra dia ny rafitra azy ary ny tsy tiako indrindra dia ny Batteran'ny finday . Ny fiainana batterie iPhone dia tsy tena tsara amin'ny herintaona. Ireo Apple 6s ampiasainy irery dia efa niasa...
2200mAh iphone 6s super capacitreurie
Izany hoe ny iPhone 6s izay efa nampiasaina nanomboka tamin'ny taona 2016 dia nandia fanakatonana mandeha ho azy taorian'ny roa taona, ary niditra ny fanjakana fikojakojana ny bateria iPhone 6s . Mazava ho azy fa izany dia midika fa ny...
Ny bateria Li-polymer ho an'ny iPhone 6s 1715mAh
Ny fatran'ny bateria iPhone 6s dia nihena raha oharina amin'ny iPhone 6, ny herinaratra Apple iPhon e 6s dia 1715mAh, ary fantatsika fa ny herin'ny batterie iPhone 6 dia 1810mAh, izay mampiseho fa tsy manam-pahefana 95mAh. Koa satria ny...
amboary ny bateria lipo vaovao 6s vaovao
Azo soloina ny bateria finday Apple , fa ny bateria finday dia azo soloina na tsia. Inona koa, voalohany indrindra, raha latsaka ambany 80% ao anatin'ny herintaona ny sandan'ny fahazoan-dàlana Apple finday vao novidina, ny bateria iPhone dia...
Ny bateria finday iPhone 6s finday tsara indrindra amidy
Rehefa ny finday finday dia ao anatin'ny toetry ny herinaratra ambany, na avo loatra ny vanim-potoana simika, na napetraka amin'ny toerana mafana, dia mety hihaona amin'ny lozam-pifamoivoizana tsy ampoizina ny mpampiasa. Amin'ny...
Fonosana: Packed with white box
OEM ambany vidy iphone 6s tany am-boalohany
Mividiana iPhone vaovao amin'ny alàlan'ny tranokala ofisialin'ny Apple, Apple Store, na fahazoan-dàlana ofisialy mba hankafizana antoka mandritra ny herintaona. Mandritra izany fotoana izany, raha tsy mahatsapa fahasimbana tsy olombelona...
Fivarotana lafo vidy mora apple apple bateria vaovao
Nampiasa finday finday tsy azo esorina ny iPhone hatramin'ny nananganana azy, ary izy no voalohany mampiasa bateria finday tsy esorina amin'ny telefaona finday. Koa maninona no hiresaka momba ny olan'ny iPhone mampiasa bateria azo...
Solosaina finday finday fanoloana bateria finday 6S
Ahoana ny fomba hamerenana ny fanamafisana na tsia ny batteran'ny Apple iPhone anao na tsia, Voalohany, manavao ny iPhone anao amin'ny iOS 10.2.1 na aorian'izay ary sokafy ny setting> Batterie. Raha misy olana amin'ny batterie...
Ny varavaran'ny bateria Apple dia manondro andiana olana momba ny bateria iPhone tsara tarehy toa ny fipoahana an-tsakany sy an-davakin'ny bateria finday Apple. Nanaitra ireo mpankafy Apple maro izany. Tamin'ny 10 Janoary 2018, telefaona...
Apple iPhone 6S Battey Fizarana bourte Original
Maninona no fanamboarana ny bateria Apple Battery.Reason iray: Ny haben'ny finday finday dia mihena be ary tena mila soloina. Mazava ho azy, afaka manohy mampiasa azy io ianao nefa tsy manolo azy io. Na izany aza, mazàna ny bateria finday dia...
Soloy bateria iPhone 6S vaovao
Ny batterie iphone 6S dia mampiasa ny amboara IC avo lenta ampidirina amin'ny tombo-kase am-boalohany, avy amin'ny fitahirizana ny sela ka hatramin'ny famokarana, dia mihena amin'ny tsy fahampian'ny tahan'ny fiovam-po taloha...
Shina IPhone 6S Battery mpamatsy
Ny battera iphone 6S dia mampiasa ny fonosana bitika avo lenta miavaka miaraka amin'ny tombo-kase voalohany, avy amin'ny fametrahana ny cellule ho an'ny vokatra, dia mamakivaky ny tsy fahampian'ny haavon'ny fiovaovan'ny chip taloha teo amin'ny 99% ary nanamora ny fanavaozana ny taham-pifandraisana ho 99.9%. Ny Battery Mobile Phone dia natao ho an'ny fiarovana avo roa heny mba hisorohana ny làlam-pahefana, ny fihodinana fahita mahazatra miaraka amin'ny famonoana metaly.
Iphone 6S Battery Apple 6S Battery Iphone 6S Battery External Apple Iphone 6S Battery Iphone 6 Battery